0 ihlobo 2016 - A ihlobo olungileyo
ithunyelwe 4th EyeDwarha 2016 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi County Cricket, eNgilani, Phakistan, esri Lanka, Test Cricket, Yorkshire.
Ngoko ke, le 2016 cricket lonyaka elifanelekileyo kwaye footballers uyiguqulele obusa tabloids kunye TV. What did we make of this year in inter­na­tion­al crick­et and domest­ic cricket.
1 UMichael Clarke -Kude
ipapashwe 10th EyeThupha 2015 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi Ostreliya. uvuselelwe 3 EyeDwarha, 2016 .
Ngoko ke, UMichael Clarke ubhengeze umhlala phantsi kwiqakamba yamazwe aphesheya emva kovavanyo lokugqibela loMlotha e-oval. Uninzi sele luhlawule umrhumo, siza bekungenjalo yayindikhathaza malunga ngokwenza ukuba. Apha kutheni.
ipapashwe 10th EyeThupha 2015 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi Test Cricket. uvuselelwe 3 EyeDwarha, 2016 .
Ngemidlalo yovavanyo embalwa egqityiweyo ukugqiba ukungena 3 okanye iintsuku ezi-4, kubekho intetho kwezinye iikota malunga nokuncitshiswa kwemidlalo yovavanyo ukuya kwiintsuku ezi-4. Sithanda ukunika ukungabhengeza umbulelo ongazenziswanga nakweyiphi na imibono enjalo.
0 Steve Smith - inombolo yehlabathi 1 umlomo, ukuba inani 1 batsman
ipapashwe 10th EyeThupha 2015 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi Ostreliya, uthuthu. uvuselelwe 3 EyeDwarha, 2016 .
Sivuyisana noSteve Smith othathe isikhundla se- “Glen McGrath” ngokuqonda esidlangalaleni i-hubris yase-Australia.. Masivume ukuba McGrath, umntu phezu 500 iilokhwe zovavanyo, kunye nelungu elihlanganayo lelinye lawona macala makhulu ngalo lonke ixesha, unokuxolelwa ngokucinga ukuba icala lakhe lingaba mhlophe eNgilane, nangona ukuyithetha ngokuvakalayo kuyithuka kwaye ingelonxalenye yomoya wentlonelo apho kufanele ukuba kuthethwe khona ikhilikithi. Steve Smith nangona kunjalo, Indoda eyayinovelwano okokugqibela xa yayindwendwela eNgilane kwaye yanovelwano kwakhona kuthotho lwangoku (ukuba siyawakhuphela ngaphandle amakhulu akhe aphindwe kabini eyenziwe kwifleti akukho nto enkosi).